Jose Mourinho Oo Sheegay In Manchester United Ay Kaalinta Afraad Geli Doonto Ka Hor Dhamaadka Sannadka - Gool24.Net
Jose Mourinho Oo Sheegay In Manchester United Ay Kaalinta Afraad Geli Doonto Ka Hor Dhamaadka Sannadka
November 23, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Dhamaadka bisha December, Manchester United waxay ka mid noqon kartaa afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League, sida uu aaminsan yahay tababare Jose Mourinho.
United ayaa waxay hadda ku jirtaa kaalinta siddeedaad, waxaanay siddeed toddoba ka hoosaysaa kooxda kaalinta afraad fadhida ee Tottenham, hase yeeshee Mourinho oo shir jaraa’id oo uu kaga hadlay ciyaarta Crystal Palace ee Sabtida ka dhacaysa Old Trafford, ayaa waxa uu sheegay in inkasta oo farqi badan oo dhibco ah ay u dhexeeyaan, haddana ay suurtogal tahay in dhamaadka bisha dambe ee December ay geli karayaan kaalinta afraad.
“Waa farqi weyn, laakiin waxaan ogahay in illaa dhamaadka December aanu haysano siddeed kulan oo Premier League oo aanu ciyaarayno, waxaynu ka hadlaynaa waa siddeedaad kulan oo 24 dhibcood ah. Waxaanan aaminsanahay inaanu halkaas (kaalinta 4aad) gaadhi doono.” Ayuu yidhi.
Tababarahan 55 jirka ah ayaa waxa uu u dhow yahay inuu wada helo dhamaan ciyaartooyadiisa oo uu saf xoog badan soo xusho ciyaarta Palace, waxaana uu u halgami doonaa inuu guul gaadho, isla markaana ay kasoo kabtaan guul-darrada kulankii ugu dambeeyey ay Manchester City ugu xambaarisay 3-1.
Mourinho waxa uu xaqiijjiyey in Anthony Martial oo ah laacibka ugu goolasha badan kooxdiisa xili ciyaareedkan inuu diyaar u yahay kulanka Crystal Palace oo uu kasoo kabtay dhaawac haleelay.
“Anthony Martial wuu nala joogay, mana tegin ciyaarihii qaramada, dalkiisuna wuu ogaa dhibaatadiisa oo fasax uu ku joogo ayey siiyeen, xaqiiqdiina si adag ayuu u shaqeeyey. Wuxuu ku jiray xaalad dhaawac hordhac ah, laakiin diyaaar ayuu u yahay kulanka berri. Miyuu diyaar u yahay inuu saddex kulan toddobaadkii ciyaaro? Ma garanayo, laakiin kulanka ugu muhiimsan waa ka soo socda.” Ayuu yidhi Mourinho.
Laacibka khadka dhexe ee Marouane Fellaini ayaa isaguna taam u ah kulankan, waxaanu kasoo kabtay dhaawac ku haleelay ciyaarihii saaxiibtinimo ee xulkiisa Belgium. Sidoo kale waxa tababarka kusoo laabtay marcus Rashford, Romelu Lukaku iyo Paul Pogba oo dhamaantood ka bogsaday dhaawacyo fudud oo ay ka cabanayeen.
Manchester United oo hunguri ka hayo inay kaalinta afraad gasho, ayaa waxay 5 December martigelin doontaa Arsenal oo kaalinta lixaad fadhida ka hor inta aanay 16 December safar ugu tegin Liverpool, haddii ay labadaas kulan iyo kuwa ka horreeya guulo gaadhana, waxa uu Mourinho ka dhabayn karaa hammigiisa ah inuu kaalinta afraad galo inta aanu sannadkani dhamaan.